Umgca Wokucinezela iCompact, umgca woFinekiso lweeCompact, Umatshini wokucinezelwa kweCompact, Umatshini wokucinezela wokutya eChina
Inkcazo:Umgca Wokucinezelwa kwecandelo,Umgca woFinekiso lweeCompact Press,ICompact Cinezelo lokuThintela,Cinezela imigca yokuNika ukutya,Umgca weCompact 3 Ku-1,Umtya weCoil feed
Home > Imveliso > Umxhasi we-Decoiler Straightener Feer > Umgca woFinekiso lweeCompact Press
Iintlobo zeMveliso ze- Umgca woFinekiso lweeCompact Press , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Umgca Wokucinezelwa kwecandelo , Umgca woFinekiso lweeCompact Press ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Cinezela ukondla umtya we-Hydraulic Decoiler ngesixhasi seServo  Qhagamshelana Ngoku
Cinezela kunye nenkqubo yokuhambisa ikhoyili  Qhagamshelana Ngoku
I-3 kwi-1 Decoiler edityanisiweyo kunye nabaLungisi boMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
Ukucinezelelwa kokuThengiswa koMatshini oLungiselela ngokuzenzekelayo kunye ne-Uncoiler  Qhagamshelana Ngoku
Iserver feeder ye-cum straightener cum Decoiler  Qhagamshelana Ngoku
I-NC Straightener feeders kunye nee-Uncoilers  Qhagamshelana Ngoku
Cinezela ukondla umtya we-Hydraulic Decoiler ngesixhasi seServo
T yena yenziwe ngcono Cinezela Ukondliwa Line fracturing Decoiler kunye Servo Feede r lubandakanye imisebenzi emitsha enkulu, kuquka izinto ububanzi ubuninzi 800 mm, kwaye nomsebenzi 11 imiqulu ezinika izinto ezibhijeleyo iqondo eliphezulu flatness....
Cinezela kunye nenkqubo yokuhambisa ikhoyili
Cinezela kunye nohlobo lwenkqubo yokuhambisa ikhoyili inemodeli eyahlukeneyo yokusebenza kwemigca yethu yokuhambisa ikho ilungele zonke iindidi zemithombo yeendaba. Inkqubo yokuThala kunye nekhoyili Izinto eziyinxalenye: I-Decoiler --- I-decoiler...
Umthamo we- NC servo feeder cum decoiler cum straightener Machine . NgeeNkqubo zeYaskawa Servo kunye nolawulo lweMitsubishi PLC, umgca wokudityaniswa komatshini ungafikelela ku 15 0.15mm ukuchaneka kokondla. Izinto ezifanelekileyo: Intsimbi yeCR,...
Ukucinezelelwa kokuThengiswa koMatshini oLungiselela ngokuzenzekelayo kunye ne-Uncoiler
Le 3 IN 1 yokushicilela ye-auto feeder stragithener decoiler umatshini wemoto ye-hydraulic coil, kubandakanya indawo yokuhamba yeCoil Reel yokuthatha i-coil. Ukutyhutyha phakathi kweCoil Reel kunye ne-Straightener-feeder nge-ozikhethelayo yokufaka...
Iserver feeder ye-cum straightener cum Decoiler
Idatha yokusebenza komatshini ozenzekelayo we-servo feeder cum decoiler cum ngqoener. Coil Reel ukuya kuthi ga kwi-3000kgs Isongezo-Straightener ukuya kuthi ga kububanzi obuyi-500 mm yempahla ububanzi kunye ne-approx. Ubukhulu be-3.2mm Ubukhulu...
I-NC Straightener feeders kunye nee-Uncoilers
Lo mgaqo wecoil odibeneyo ibonelela ngokulayisha imathiriyeli ye-coil, ukungasebenzi, ukuhambisa ngokuthe ngqo kunye nokondla ngelixa ifuna kuphela i-3100mm yendawo yomgangatho. Ngenxa yokuba impahla ilungelelaniswe ekungeneni komatshini...
KwiChina Umgca woFinekiso lweeCompact Press Abaxhasi
Icompact Cinezelo Lokutya Line yenzelwe ukuqhubekeka ngeplastikhi yentsimbi yeetampu zetsimbi.
Icinezelo leCompact Press Line libonisa ububanzi bekhoyili ukusuka kwi-400mm ukuya kwi-1000mm, ubunzima bekhoyili ukusuka kwi-0.3-3.2mm, ubunzima bekhoyili ukuya kwi-7000kgs.
Ukucwangciswa kweClass yeCompact Cinezelo lokuHamba : Imoto yeHydraulic Coil, kubandakanya indawo yokuhamba yeCoil Reel yokuthathwa kwe-coil kunye neecentral . I-coil Reel ene-drive eguquguqukayo yesantya esongeziweyo eyongeziweyo phakathi kwe- decoiler kunye ne-Straightener . Isetyenziselwe ukusebenza kakuhle nokuba benemizimba coil enkulu ngezantya umgca ephakamileyo elide ukuqhubela phambili kokutya.Iimpawu zecarraulic kunye neeMoto ezinamandla kunye nezinto zokwenza amandla okuphucula kunye nenqanaba lokuzenzekelayo.
Icinezelo leCompact Press Line lilungele ukugxininisa kumalungu esithuthuthu, isixhobo sombane kunye ukufakela isixhobo ekhaya, isakhelo sekhompyuter, izixhobo zefriji kunye neendawo zokuhambisa umoya-isitampu njl njl.
Umgca Wokucinezelwa kwecandelo Umgca woFinekiso lweeCompact Press ICompact Cinezelo lokuThintela Cinezela imigca yokuNika ukutya Umgca weCompact 3 Ku-1 Umtya weCoil feed Umgca wokucinezela iBuckle Line Umgca wokucinezela weCompact Press